Türkiye, Yeni Hızlı Tren Hatları Tamamlandığında Almanya’yı Geçecek – RayHaber | raillynews
[16 / 01 / 2020] Wax walba waa in ay ogaadaan in Tabriz safar tareen Turkiga	06 Ankara
HomeTURKEYGobolka Central Anatolia06 AnkaraTurkey, Germany mari doonaa marka Speed ​​Railway Line cusub ee High buuxiya
06 / 09 / 2019 06 Ankara, Gobolka Central Anatolia, tareenka, GUUD, Tareenka dhakhso ah, Headline, TURKEY
turkey line cusub yht la dhamaystiri doono in almanyay daahay
Midowga Caalamiga ah ee tareenada (UIC), taas oo firfircoon ee Turkey, sida uu sheegay km 594 xogta of line tareen-xawaaraha sare. Turkey, 9 weli network tareenka ugu xawaaraha sare ee adduunka ugu darajada. Derajo. Khadadka socda ayaa ah 1153 km. Marka la dhammaystiro khadadkaani waxay yeelan doonaan khadka tareenka xawaaraha sare ee 1747 km iyo 5 adduunka. waxay u kici doonaan khadka. Darajadan waxaa ka mid ah khadadka socda ee waddammada kale.
Ra'iisul-wasaaraha Recep Tayyip Erdogan ayaa yiri: "George sameeyey my Ahmadi Haddii fuushan tareen degdeg ah, Mehmedim, Ayşem, Fat ma this qaadan doonaa tareen degdeg ah." Waxa uu hadalkiisa raaciyay in Turkey, kuwaas oo tilmaamay in line tareen-xawaaraha sare ee dhawaan la dhamaystiray.
Sivas Congress 100. Madaxweyne Erdoğan oo ka qeyb galay munaasabadihii ka dhacay magaalada Sivas munaasabadda sanadka ayaa ku dhawaaqay in tareenka xawaaraha dheer uu gaari doono Sivas illaa Ciidda.
Marka, waa ayo hogaamiyaha adduunka ee khadka tareenka xawaaraha sare? Waa maxay xaaladda dalka Turkiga?
Wadarta wadamada kale xitaa ma ahan kala bar cabirka Shiinaha
Dunida isku-xirka xawaaraha xawaare sare leh, Shiinaha waxay leedahay faa’iido cad oo adduunka oo dhan ah. Marka loo eego xogta UIC, xariiqda tareenka xawaaraha sare ee 2019 kun ee 31 km, oo shaqeyneysa ilaa iyo bisha Maarso 43. Wadarta dhammaan wadamada kale ee adduunka kama dhigna kala bar kan Shiinaha. Kaalinta labaad waa Japan oo leh 3 kun oo 41 km. Isbaanishka (2 kun 852 km), France (2 kun 734), Jarmalka (kun 571 km) iyo Talyaniga (896 km) ayaa raacaya waddankan.
Turkey, 5 ee Europe. derajo
Turkey adduunka iyadoo km 594 9. Waa kaalmo. Yurub dhexdeeda, 5 waa khadka tareenka xawaaraha sare ee hadda jira. waxaa loo kala saaray.
Turkey ayaa boost a in line cusub
Xogta UIC ayaa sidoo kale muujineysa khadadka tareenka xawaare sare ku socda ee ka socda waddamada. Shiinaha ayaa sii wadaya ballaarinta shabakadiisa. Shiinaha ayaa ku hoos jira dhismaha '7 kun ee 207 km khadka tareenka xawaare sare ku socda. Qadka dhismaha ee kunka 336km ee Iiraan ayaa hada socda. Halka Turkey ayaa 153 kun km tareenka-xawaaraha sare ee dhismaha. Hogaamiyaha yurub ee Spain wuxuu sidoo kale ku fidin doonaa xNUMX km dheeri khadka tareenka xawaaraha sare. Jarmalka gudaheeda, 904 km ayaa sameyneysa khadad badan.
Marka khadadka cusub ay dhammaystirmaan, Turkey mari doonaa Germany
Marka la dhammeystiro, dhismaha ka socda khadadka 9 Turkey. Caadiga ah 5. ayaa u kici doona safka. Shiinaha ayaa mar kale ka dhici doona shir madaxeedka fog. Spain ayaa ka sara mari doonta Japan oo u kac doonta kaalinta labaad. In Turkey, ka dibna France 5. ayaa nidaamsan. Marka dhamaystirka dhismaha joogtada ah ee line waxay noqon doontaa 747 network-xawaaraha sare ee tareenka kun km Turkiga. Jarmalka wuxuu lahaan doonaa kumanaan 718 km marka ay dhameystirto khadkiisa socda.
source: waxaan Euronews.co
Khadadka sare ee tareenka si loo hagaajiyo Jarmalka
Eskişehir 'New Tram Line' oo ka shaqeynaya 25 January 2014
Tareenka xawaaraha sare ee Jarmalka ICE 25 sano jir ah
Shaqada tareenka xawaaraha sare ee Japan, Faransiiska iyo Jarmalka (Video)
Khadadka cusub ee tareenka